Akwụkwọ Nsiokwu 7 Festive Edition 2018 - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ntinye akwukwo nke 7 Festive Edition 2018
Nabata na mbipụta ọhụrụ nke Akụkọ wardgwọ Ọrụ. Anyị nwere ọtụtụ akụkọ na akụkọ maka gị. Nwere ike ijide nri Twitter anyị na blọọgụ kwa izu na ibe obibi. Kporie ihe ncheta Scott na-eche anwansi na abalị abalị na Edinburgh. Nzaghachi niile nabatara Mary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Na mbipụta a College Royal of General Practitioners-accredited workshops Òtù Ahụ Ike Ụwa na-amata Porn Harms Onyinye anyị nyere Nnyocha Autism, Mmekọahụ na Mmekọahụ Cambridge, England Frankfurt, Germany Virginia Beach, USA Budapest, Hungary Na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ Nyere ndị nne na nna aka Onyinye maka CEO Ọdịdị mgbasa ozi Julie McCrone si na BBC Alba mee ka Ruairdh Maclennan na Mary Sharpe gbaa ọsọ Kachasị ọchịchọ maka 2019
College Royal of General Practitioners-accredited workshops
N'afọ a, anyị zutere nchịkọta 10 RCGP na-emetụta mmetụta nke ịntanetị na-ahụ maka ahụike na ahụ ike na UK na Ireland. Anyị nwere ndị na-efe efe site n'ebe dị anya dika Finland, Estonia, Belfast na Netherlands. Ndị na-agụnye gụnyere GP, psychiatrist, ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ ntorobịa, ndị ọrụ mmekọrịta, ndị nkuzi, ndị ndụmọdụ, ndị ọka iwu na ndị na-agwọ ọrịa.
Otu TRF na Glasgow ya na Katriin Kütt, onye nkuzi nwoke na Eesti Tervishoiu Muuseum na Estonia na onye nkuzi mgbake Matthew Cichy si Belfast Anyị nwere obi ụtọ iso ndị Ụlọ Ọrụ Maka Ntorobịa na Ikpe Ikpe Ikpe maka ụlọ ọrụ Glasgow na ụlọ ọrụ iwu Anderson Strathern maka Edinburgh otu. Anyị na-enwekwa ezigbo nkwado na Ọrụ Nduzi West West na Killarney ebe anyị ga-alaghachi na February n'ihi nnukwu ọchịchọ. Obi anyị nwere mmasị, ịnụ ọkụ n'obi na mmasị maka inwekwu ihe ọmụmụ otu n'ime ha nke gụnyere Cork na Oge opupu ihe ubi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka anyị bịa n’obodo gị, biko mee ka anyị mata n’oge na-adịghị anya anyị na-amalite ịtọpụta ụbọchị na ebe dị mkpa maka afọ 2019.
Darryl na Mary na Joy O'Donoghue na Anna Marie O'Shea nke SouthWest Counselling Center na Killarney Òtù Ahụ Ike Ụwa na-amata Porn Harms N'ọnwa a, Òtù Ahụike Ụwa (WHO) kwetara na "nsogbu ịkwa iko nke mmekọahụ" (CSBD) bụ nke mbụ ya na Nhazi Omume Ọrịa International (ICD-11). Lee anyị blog na ya. Ọ na-esi n'aka kọmitii nhọrọ nke ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ site na mmegide kpụ ọkụ n'ọnụ site n'aka ndị nwere mmasị na ejikọta na ụlọ ọrụ mgbasa ozi multi-ijeri dollar gụnyere ndị na-ajụ nwoke na nwanyị bụ ndị na-ekweta na oke porn nwere ike ịbụ ihe na-emerụ ahụ.
Onyinye anyị nyere Nnyocha Ụgwọ Ụgwọ ahụ abụghị nanị na-enyocha nchọpụta ọhụrụ banyere mmetụta porn kwa ụbọchị, mana anyị na-enyekwa aka na ya ma mee ka ndị ọkachamara mara mara ya. Iji mezuo nke ahụ, nyochaa ndị ọgbọ anyị akwụkwọnke chịkọtara nchọpụta e mere na 4th Nzukọ Mba Nile Maka Ịgba Ahụhụ (ICBA) e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ Mmekorita nwoke na nwoke na nwanyi. Nke a bụ anyị blog na ya. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akwụkwọ zuru ezu. Obi dị anyị ụtọ ịkpọsa na otu akwụkwọ yiri nke ahụ na-achikota akwụkwọ nchọpụta kachasị ọhụrụ site na 5 nke afọ ath E debere ogbako ICBA ma bipụta ya, ihe niile dị mma, n'oge 2019 mbụ. Anyị ga-agwa gị mgbe.
Autism, Mmekọahụ na Mmekọahụ Mmetụta ndị na-eto eto na-enwe n'ikike nke autistic, karịsịa ndị nwere Asperger's Syndrome dị elu, na-adọrọ mmasị na ịntanetị na uche anyị. Mgbe onye nwere ụdị ọrịa a na-enwe site na nwa amụrụ ya ikpe maka inwe ihe oyiyi na-adịghị mma nke ụmụ, ọ na-apụta na enwere ọtụtụ ihe na-ezighi ezi na usoro ikpe ahụ ka ọ na-emeso ndị a. Anyị edeela ọtụtụ Blọọgụ na isiokwu. Lee ebe a kwa a Akụkọ Mama m. Njem nke TRF Cambridge, England Onye isi ochichi anyị, bụ Mary Sharpe, dị nsọ ikwu okwu na Lucy Cavendish College, Cambridge na June afọ a na òkù nke onyeisi oche ya bụ Jackie Ashley. Mary bụ onye otu nọ n'ebe ahụ. Isiokwu nke Intanet ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ụbụrụ na-eto eto bụ mgbe ezi ìgwè mmadụ na-atụgharị na nke zuru oke, mahadum nwere obi ụtọ na ndị òtù 90 nke mahadum na ndị ọha na eze gara. Ọ bụ otu n'ime ìgwè ndị ka ukwuu na mahadum maka okwu ihu ọha. Mgbe ahụ, anyị na-eri nri abalị n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ụlọ akwụkwọ dị na mahadum ebe Mary nọ na-asọpụrụ. Ọ dị mma ịlaghachi na Cambridge.
Frankfurt, Germany Anyị kwenyere (dika Amazon bestseller si ndepụta) akwụkwọ Gary Wilson Akpụkpọ ụkwụ gị na Porn - Intanet Ịgba chaa chaa na Egwuregwu Sayensị na-apụta bụ akwụkwọ kachasị mma n'ahịa nke na-akọwa nsogbu gbasara ịntanetị na mmetụta ya na ahụike na mmekọrịta. Site na ọtụtụ narị akụkọ nyocha na nke ọma sayensị sayensị, ọ na-eme ka isiokwu dị mfe inweta. Iji nyere aka kwalite ya n'asụsụ ndị ọzọ (nke dị n'asụsụ Dutch, Arabic na Hungarian, ndị ọzọ na-aga n'ihu) anyị gara na Frankfurt Book Fair na Germany. Anyị zutere ọtụtụ ndị bara uru ma nwee olileanya ịzụlite kọntaktị ahụ na afọ na-abịanụ.
Virginia Beach, USA Ụmụ akwụkwọ fỌ nwere obi ụtọ na anyị bụ ndị na-ekwu okwu na Society maka Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọahụ (SASH) nke ogbako nke a n'October na Virginia Beach, USA ebe anyị na-eme ka ndị anyị na ha na-emekọ ihe na ihe ọmụmụ anyị maka ụlọ akwụkwọ na ihe omume ndị ọzọ na-arụ ọrụ maka ndị ọkachamara. Mary Sharpe, onye isi anyị, bụ onye so na Kọmitii Ndị Nlekọta nke nzukọ a ma nọgide na-enwe mmekọrịta n'etiti ndị ọkachamara na mpaghara a gafee ọdọ mmiri ahụ.
Budapest, Hungary TRF nwere obi ụtọ na a ga-akpọ ya na Budapest, Hungary na-ekwu okwu na ogbako mba ụwa nke Ụlọọrụ Na-ahụ Maka Ikpe na NGO na-aga n'ihu na mbido December. Akwụkwọ Mary na-enwe mmetụta nke ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịzụ ahịa ụmụ mmadụ na omume kacha mma maka ịme ya. E nwere ndị na-ekwu okwu banyere ịkwa iko na mmegbu ụmụaka site na Paris na Washington DC.
Dawn Hawkins si National Center na Mmekọahụ na Washington DC
Na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ TRF na-aga n'ihu na-akụzi bụ ụlọ akwụkwọ na ngalaba ndị nweere onwe ha na nke steeti. Atụmatụ nkuzi nke 6 anyị nọ n'usoro ịbụ nke a na-eme ka ọ dị mma ma na-emeziwanye tupu anyị ewepụta ha na ezigbo ego ụlọ akwụkwọ na 2019. Onye isi anyị ga-ekwu maka njikọ dị n'etiti ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekọahụ na ihe omume Iwu nke Iwu na 31 Jenụwarị 2019.
Nyere ndị nne na nna aka ebe a bụ blog, Ntuziaka Ndị Nne na Nna na Intanet Ịntanetị na ozi gbasara nnukwu ego. A na-emelite ya mgbe nile ma jiri nlezianya leba anya mgbe niile.
Onyinye maka CEO
Mary Sharpe Onye isi anyi choputara ma họrọ maka NatWest WISE100 nwanyị na-enye onyinye maka ọrụ ya n'ọhịa ọhụrụ ọsụ ụzọ. Obi dị anyị ụtọ na ọrụ anyị amalitela ịmata.
Ọdịdị mgbasa ozi BBC (TV na Radio), Daily Mail, The Times, London Evening News na akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ na-ede banyere ọrụ anyị. Lee anyị ebe mgbasa ozi maka nkọwa ndị ọzọ. Meri ga-apụta na akwụkwọ akụkọ na BBC Scotland gbasara ụmụ na-akpali agụụ mmekọahụ na BBC ALBA na oge opupu.
Julie McCrone si na BBC Alba mee ka Ruairdh Maclennan na Mary Sharpe gbaa ọsọ Kachasị ọchịchọ maka 2019 Ndị ọrụ na ndị enyi nke Relọ Ọrụ Nri ahụ ga-achọ gị niile maka ọdịmma 2019. Biko soro anyị na Twitter @brain_love_sex. Ọ bụrụ na ị maara onye ọ bụla ga-achọ ịmatakwu banyere mmetụta porn na ahụ ike na mmekọrịta, biko kwadoro ya Akpụkpọ ụkwụ gị na Porn - Intanet Ịgba chaa chaa na Egwuregwu Sayensị na-apụta.
Kachasị ọchịchọ maka 2019 Ndị ọrụ na ndị enyi nke Relọ Ọrụ Nri ahụ ga-achọ gị niile maka ọdịmma 2019. Biko soro anyị na Twitter @brain_love_sex. Ọ bụrụ na ị maara onye ọ bụla ga-achọ ịmatakwu banyere mmetụta porn na ahụ ike na mmekọrịta, biko kwadoro ya Akpụkpọ ụkwụ gị na Porn - Intanet Ịgba chaa chaa na Egwuregwu Sayensị na-apụta.
Copyright © 2019 The Foundation Rewards Fund, Ikike niile echekwara. Ịchọrọ ịgbanwe otú ị nwetara ozi-e ndị a?